Sierra Leone oo qiimeynta FIFA kaga sara martay Nigeria - jornalizem
Sierra Leone oo qiimeynta FIFA kaga sara martay Nigeria
South Africa ayaa ah xulka kaliyaha ee Africa ee horumarka ugu weyn ka sameeyay qiimeynta kubadda cagta adduunka ee Fifa oo bishiiba mar la sameeyo kadib markii uu 4 darajo sare u soo kacay, fariistana booska 67aad.
Sierra Leone ayaa 2 darajo sare u kacday isla markaana kursiga dhigatay booska (61) waxeyna 2 darajo ka sara martay xulka Nigeria oo ku jira booska (63) waana markii ugu horeysay taariikhdeeda oo ay heer intaasi la eg ay gaarto.
Ivory Coast ayaa ah xulka ugu darajada sareeya Africa wuxuuna qimeynta adduunka kaga jiraa kaalinta (15) , xulka Ghana ayaa ah xulka labaad ee ugu darajada sareeya Africa kaasoo ku jira (22).
Halkaan ka eeg sida xulalka adduunka ay ugu kala sareeyaan qiimeynta bilaha ah ee Fifa
DR Congo ayaa niyad jab kala kulantay qiimeyntaan markii 5 darajo ay hoos u dhacday isla markaana loo tuuray booska (124). xulkaan oo 1974 noqday horyaalka qaaradda Africa ayaa wuxuu ka hoos maray Benin, Central African Republic iyo Sao Tome e Principe.
Nigeria oo 4 koob oo adduun ka qeybgashay isla markana heysata 2 koob oo ah African Cup of Nations ayaa si lama filaan ah kaga hoos martay Sierra Leone.
Sierra Leone, waligeed wax koob adduun ah kama qeyb galin hayeeshee koobka qaramadda Africa ayeey 2 mar ka qeybgashay gaar ahaan sanadihii 1994 iyo 1996.